Market Archives - Hamro eSansar
March 16, 2018 adminLeaveaComment on काठमाडौंमा ‘फुटवेयर बिजनेस एक्स्पो’ सुरु
सेयरको अनलाइन कारोबार कसरी हुन्छ? अवश्य जान्नुहोस ।
March 14, 2018 adminLeaveaComment on सेयरको अनलाइन कारोबार कसरी हुन्छ? अवश्य जान्नुहोस ।
निरन्तर घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको एउटा आस अनलाइन कारोबारको सुरुवात भए बजारले केही राहत पाउँथ्यो भन्ने छ । धेरैमा के हतारो पनि देखिन्छ भने सेयरको किनबेच आफ्नै हातले गर्न पाए त्यसको मजा अर्कै हुने थियो । ब्रोकरकहाँ धाउनु पनि नपर्ने, आफूले चाहेको मूल्यमा इन्टरनेटको पहुँच भएको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सजिलै कारोबार गर्न सकिने, चाहे त्यो विदेशमा […]
प्रिमियर इन्स्याेरेन्सकाे एफपीअाे तपार्इलार्इ पर्याे कि परेन ? नतिजा हेर्नुहाेस्
February 1, 2018 adminLeaveaComment on प्रिमियर इन्स्याेरेन्सकाे एफपीअाे तपार्इलार्इ पर्याे कि परेन ? नतिजा हेर्नुहाेस्
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको थप नयाँ सेयर बाँडफाँड भएको छ । बिहीबार कम्पनीको नक्सालस्थित कार्यालय एफपीओ बाँडफाँड भएको हो । ११ कित्ता सेयर ५ जनाको हातमा पर्दा आवेदन रद्ध हुनेको संख्या अधिक देखिएको छ । सेयर बाँफाँडको नतिजा केहीबेरमा मेरोलगानीमा प्रकाशित हुनेछ । यस अघि मेरोलगानीले गरेको प्रक्षेपण नजिक कुल आवेदकमध्ये ६५ हजार ९५१ जनाले मात्र १० […]
यही माघ १९ र २० गते भृकुटीमण्डपमा बैंकिङ एक्स्पो हुने भएको छ । यदि तपाई पनि सेयर बजारमा लगानी गर्ने तरिका थाहा पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक्स्पोमा जान नछुटाउनु होस् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, नेपाल वित्तीय संस्था संघ तथा माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघ सँगको सहकार्यमा मिडिया इन्टरनेशनलले उक्त एक्स्पोको आयोजना […]
January 13, 2018 January 13, 2018 adminLeaveaComment on मंगलबारदेखि एनआईसी एशिया म्यूचुअल फण्ड बिक्री, बार्षिक १६ प्रतिशत लाभांश
एनआईसी एशिया क्यापिटलले माघ २ गतेदेखि एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड (म्युचुअल फण्ड)को बिक्री गर्ने भएको छ । उक्त म्यूचुअल फण्डले औषत बार्षिक रुपमा न्यूनतम १६ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिने अपेक्षा गरिएको एनआसी एशिया क्यापिटलका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत झनकराज ढुङ्गेलले बताए । साथै, म्यूचुअल फण्डको बार्षिक प्रतिफल पहिलो बर्ष १५ दशमलव ५७ तथा सातौ बर्षमा १६ दशमलव […]